Ndingayibiza phi imoto yam?
Ekhaya kwigaraji yabucala / kwindlela yokuqhuba, okanye kwindawo yokupaka echongiweyo / indawo yokupaka ekwabelwana ngayo (eqhelekileyo kumagumbi).
Emsebenzini kwindawo yakho yokupaka iofisi, nokuba ibekelwe bucala okanye (semi) yoluntu.
Esidlangalaleni ezitalatweni, kuhola wendlela, nakweyiphi na indawo yokupaka kawonke-wonke onokucinga ngayo - umz. Ukuba "ukusebenzisana" kuyasebenza, unamandla okuhlawulisa ababoneleli bezitishi ezahlukeneyo.
Kuthatha ixesha elingakanani ukutshaja imoto yam?
Amaxesha okutshaja ayahluka ngokuxhomekeke: kwinqanaba lakho langoku lokutshaja kwebhetri, umthamo webhetri yakho, umthamo wesikhululo sakho sokutshaja kunye noseto, kunye nomthamo wamandla esitishi sakho sokutshaja (umz. Nokuba kusekhaya okanye kwisakhiwo seofisi).
I-plug-in hybrids ifuna iiyure ezi-1-4 ukuba zihlawuliswe ngokupheleleyo, ngelixa iimoto zombane ezigcweleyo zifuna iiyure ezi-4-8 (ukusuka kwi-0 ukuya kwi-100%). Ngokomndilili, iimoto zipakwe ekhaya ukuya kuthi ga kwiiyure ezili-14 ngosuku, nasemsebenzini malunga neeyure ezisi-8 ngosuku. Ngesikhululo sokutshaja onaso, lonke eli xesha unokusetyenziselwa ukonyusa imoto yakho ukuya kwi-100%.
Umbane oqhelekileyo: Lumkiswa ukuba ubiza i-EV yakho kwindawo yombane rhoqo. Ukutshaja ekhaya kuya kufuna intambo yokutshaja ethintela ukuphuma kombane kunye nobushushu. Ukongeza, kuya kufuneka uqiniseke ukuba indawo ekufuphi ikufutshane nemoto yakho, njengoko ungaze usebenzise intambo yolwandiso ukuhlawulisa imoto yakho. Nangona kunjalo kuthathelwe amanyathelo okhuseleko, ukutshaja kwindawo yokuphuma eqhelekileyo kuyadimaza, njengoko uninzi lwezakhiwo zokuhlala zingenazintambo zokwenza umbane ophakamileyo. Amaxesha okutshaja aya kuxhomekeka ukuba ukweliphi ilizwe. Kwi-EV enoluhlu lwe-160 km, unokulindela ixesha lokutshaja malunga neeyure ezi-6-8 eYurophu.
Isikhululo sokutshaja se-EV: Le yeyona ndlela icetyiswayo yokutshaja imoto, kuba yenza ukusetyenziswa okukhuselekileyo nokufanelekileyo kwemoto yakho kunye namandla emithombo (umz. Ikhaya okanye isakhiwo seofisi). Ngesikhululo sokutshaja onaso, ngalo lonke ixesha usiya endleleni uqinisekile ukuba unemoto ehlawuliswe ngokupheleleyo enoluhlu oluphezulu. Isitishi sokutshaja sinokutshaja ukuya kumaxesha angama-8 ngokukhawuleza kunendawo yokuphuma yesiqhelo. Oku kuthetha ukuba nayiphi na i-EV iya kuhlawuliswa nge-100% kwiiyure ezi-1-4 kuphela. Fumana isishwankathelo samaxesha okutshaja kwezona ndawo zixhaphake ibhetri apha.
Isitishi sokutshaja ngokukhawuleza: Izikhululo zokutshaja ngokukhawuleza ziyavela rhoqo ngaphandle kwizixeko nakwiindlela ezingoohola bendlela. Ngaphandle kokukhawuleza (ihlawulisa kwimizuzu engama-20 ukuya kwengama-30), itshaja ekhawulezileyo ekhawulezayo izisa i-EV kuphela ukuya kuthi ga kwi-80% ngexesha leseshoni enye yokutshaja. Ngenxa yezixhobo ezixabisa kakhulu kunye nezixhobo ezikhawulezayo zokutshaja, ezi tshaja zihlala zithengwa kwaye zakhiwe ngokwesicelo ngasinye ngoorhulumente basekhaya.
Loluphi uhlobo lwesikhululo sokutshaja endifanele ukusifaka?
Kukho iintlobo ezininzi zezikhululo zokutshaja-kubandakanya iNqanaba loku-1, iNqanaba 2 kunye ne-DC yokutshaja ngokukhawuleza-ke oyikhethayo iya kuxhomekeka kwinani lezinto. Oku kubandakanya amatyala okusetyenziswa kwabathengi kulindelwe, iindleko kunye nokuqwalaselwa koyilo lwesiza.
Zeziphi izinto eziyiliweyo zesiza ezichaphazela iindleko zokufaka?
Iindleko zokufakwa kwesikhululo sokutshaja zingagqitha kwiindleko zekhompyuter uqobo kwaye zichaphazeleka kwinani lezinto zoyilo ekufuneka ziqwalaselwe njenge:
Inkonzo yombane ekhoyo ngoku. Lonke ufakelo lwesikhululo esitsha sokutshaja kufuneka lube nohlalutyo lomthwalo olwenziwe kwimfuno yombane yokubonelela ukuba ngaba kukho amandla okongeza izitishi zokutshaja ze-EV. Izikhululo ze-AC zenqanaba 2 ziya kufuna isekethe ye-240-volt (40 amp) kunye nokuphuculwa kwenkonzo yombane kunokuba yimfuneko.
Umgama phakathi kwepaneli yombane kunye nesikhululo sokutshaja. Umgama omde phakathi kwepaneli yombane kunye nesikhululo sokutshaja se-EV kuthetha iindleko eziphezulu zokufaka kuba iyonyusa inani lokuntywila (kunye nokulungisa), ukuhambisa, kunye nocingo. Kuyinto enqwenelekayo ukunciphisa umgama phakathi kwepaneli yombane kunye nesikhululo sokutshaja se-EV kangangoko kunokwenzeka ngelixa ujonga indawo yesikhululo sokutshaja kwipropathi.
Indawo yesitishi sokutshaja kwipropathi. Cinga ngempembelelo yokubeka isikhululo sokutshaja kwindawo ethile kwipropathi. Umzekelo, ukubeka iindawo zokupaka kwizikhululo zokumisa ngasemva kwesakhiwo kunokudimaza ukusetyenziswa kwazo, kodwa abanye abathengi banokucaphuka ukuba isikhululo sokutshaja sifakwe kwiindawo zokupaka eziphambili ezihlala zihlala zingenamntu kuba bambalwa abaqhubi be-EV.
Ezinye izinto eziqwalaselwayo zinempembelelo encinci kwiindleko zokufaka kodwa zinokuba nefuthe kwindlela esisebenza ngayo isikhululo ekuncedeni abaqhubi be-EV kunye nabanye abathengi. Ezinye zezi zibandakanya indlela intambo yokutshaja eyenzayo xa isetyenziswa kunye neendlela zolawulo lwendawo yokupaka.
Ngaba ndingabahlawulisa abantu ngokusebenzisa isikhululo sam sokutshaja?
Ewe, uvumelekile ukuhlawulisa abantu ngokusebenzisa isikhululo sakho nangona abanini bezikhululo abaninzi bekhetha ukubiza ukuhlawulisa simahla njengesihendo okanye isibonelelo. Umzekelo woku ngumqeshi onikezela ukutshaja simahla kubaqeshwa nakubathengi. Ukuba uthatha isigqibo sokuhlawulisa ngokusetyenziswa kukho izinto ezininzi ekufuneka uzithathele ingqalelo ekumiseleni ezona zilungele wena.
Ukuhlawulisa ukusetyenziswa kuxhomekeke kwindawo. Isigqibo sakho siyakuxhomekeka kwinxalenye yendawo esisebenza kuyo. Kweminye imimandla yeLizwana laseNew York, ngakumbi kwizixeko ezikhulu, ezinye iigaraji ezihlawulisa ukupaka zinokufumana abathengi abakulungeleyo ukuhlawula ngakumbi ukuhlawuliswa kwe-EV rhoqo kuba bengenakho ukubiza imali kwindawo abahlala kuyo.
Ukutshaja ngokusetyenziswa kuxhomekeke kwinjongo yokufakwa kwesiza. Inzuzo eveliswe sesi sikhululo ayililo lodwa ithuba lokuvelisa ingeniso kutyalo-mali kwisikhululo sokutshaja. Izikhululo zokutshaja zinokutsala abaqhubi be-EV abathi emva koko baxhase ishishini lakho, bagcine abasebenzi abaxabisekileyo, okanye babonelele ngemeko yolawulo lwendalo olunokunceda ekutsaleni abahlali be-EV kunye nabangengabo i-EV, abasebenzi okanye abathengi.
Utshaja njani ukusetyenziswa kwemisebenzi. Abanini bezitishi banokuhlawulisa ukusetyenziswa ngeyure, ngeseshoni nganye, okanye ngeyunithi nganye yombane.
Ngeyure: Ukuba uhlawulisa ngeyure, kukho indleko ebekiweyo kuyo nayiphi na imoto nokuba iyabiza okanye ayibizi, kwaye izithuthi ezahlukileyo zifumana umbane kumanqanaba ohlukeneyo, ke iindleko zamandla zinokwahluka ngokubanzi ngokuhlawula iseshoni.
Iseshoni nganye: Oku kuhlala kufaneleke ngakumbi kwindawo yokutshaja okanye yokutshaja izikhululo ezinamaxesha amafutshane kakhulu, aqhelekileyo.
Kwicandelo ngalinye laMandla (ngesiqhelo iyure yekhilowathi [kWh]): Oku kuchaza ngokuchanekileyo indleko zombane kumnini wesikhululo sokutshaja, kodwa ayiniki inkuthazo kwimoto ehlawuliswe ngokupheleleyo ukuba ishiye isithuba.
Abanye abanini besiza bazamile ukudibanisa ezi ndlela, njengokuhlawulisa ireyithi ethe tyaba kwiiyure ezimbini zokuqala, emva koko inyuse izinga leeseshoni ezinde. Ezinye iindawo zinokukhetha ukuthoba iindleko zokusebenza ngokungazibandakanyi nenethiwekhi yesikhululo sokutshaja kunye nokunikezela ukutshaja simahla.
Kutheni kubalulekile ukutshaja emsebenzini?
Njengabantu abaninzi abaqhubela emsebenzini kwaye abaqhubi be-EV bayathanda ukonyusa intlawulo yabo nanini na kunokwenzeka xa benikezela ukutshaja kwindawo yokusebenza sisibonelelo esihle somsebenzi kubaqeshi abanokunikezela. Ngapha koko, ukutshaja emsebenzini kunokubanakho njengomqeshwa ophindwe kabini u-EV bonke-umbane wemihla ngemihla yokuhamba. Kubaqeshi, ukutshaja emsebenzini kunokunceda ekutsaleni nasekugcinweni kwabasebenzi kwaye kubonise ubunkokeli ekwamkeleni iitekhnoloji zamandla ezicocekileyo.
Incwadana ye-NYSERDA yokuHlawula eMsebenzini [PDF] ibonelela ngesishwankathelo sezibonelelo zokufaka izitishi zokutshaja kwiindawo zokusebenza kunye nezikhokelo kwinkqubo yokucwangcisa, yokufaka, kunye nokulawula izixhobo zokutshaja ze-EV
ISebe lezaMandla Ukuhlawuliswa emsebenzini Indawo inikezela ngesikhokelo kubasebenzi ababandakanyekayo ukuba basebenzise esi sibonelelo, kunye nolwazi oluneenkcukacha kuvavanyo, ukucwangcisela, ukufakela nokulawula ukutshaja kwindawo yokusebenza
Zithini izitishi zokutshaja ezikhawulezayo zeDC?
Ukutshaja okukhawulezileyo kwe-DC kusebenzisa ukuhanjiswa kwamandla ngokuthe ngqo (DC) kunye negalelo lama-480-volt otshintshanayo ngoku (AC) ukubonelela ngokutsha ngokukhawuleza kwiindawo ezisetyenziselwa kakhulu ukutshaja. Kuxhomekeke kwi-EV, izitishi ze-DC ezikhawulezayo zokubonelela zinokubonelela nge-80% yokutshaja kwimizuzu nje engama-20. Ukutshaja kwesantya kuxhomekeke kubungakanani bebhetri yemoto kunye nokutshaja izixhobo zekhompyutha, kodwa ii-EVs ezininzi ngoku zinokuhlawulisa ngaphezulu kwe-100 kW (ngaphezulu kwe-100 yeemayile zoluhlu kwimizuzu engama-20). Ukutshaja okukhawulezileyo kwe-DC ikakhulu kukukhetha umbane wonke izithuthi. Zimbalwa ii-EVs ze-plug-in ze-hybrid ezinokusebenzisa itshaja ekhawulezayo yeDC. Zintathu izinto zokudibanisa eziphambili zeeshaja ezikhawulezayo zeDC; I-EVs ezinokusebenzisa iitshaja ezikhawulezayo zeDC ziyahambelana kuphela kwezi zinto zilandelayo:
Inkqubo yeSAE yokudibanisa (CCS) ngumgangatho wokutshaja owamkelwa ngokubanzi osetyenziswa ngabaninzi bokwenza iimoto
CHAdeMO Umgangatho oqhelekileyo wokutshaja osetyenziswa ikakhulu yiNissan kunye neMistubishi
Inethiwekhi enkulu kaTesla isekwe kubuchwephesha bokutshaja obunokusetyenziswa kuphela ziimoto zikaTesla
Inani leenkampani zikarhulumente nezabucala zakha izikhululo zokutshaja ngakumbi eNew York State nangaphaya, kubandakanya iGunya laMandla eNew York, Electrify America, EVgo, ChargePoint, Greenlots, kunye nokuninzi.